Macalim-kaab Q. 5aad Tobban qodob oo aad ku noqon karto macalim wanaagsan Qalinkii Cabdi Caawiye | Awdalmedia.com
Macalim-kaab Q. 5aad Tobban qodob oo aad ku noqon karto macalim wanaagsan Qalinkii Cabdi Caawiye
Fri 07 September 2018.
Macalinka wanaagsan wuxuu yidhaahdaa
Ardaydaadu waxay yeelan karaan dhibaatooyin, maalmo xun, walbahaar, ama xitaa murugo. Haddii aad aragto in qaar ka mid ah ardaydaadu ay bilaabaan inay wax ka bartaan, ma rabaan inay sameeyaan dhammaan shaqada dugsiga aad siiso, oo ay rabaan inay iska bixiyaan wax walba, ha la yaabin inay kula doodaan oo ay kuu sheegaan sida xun ama caajiska ah ay wax u wadaan waxa laga yaabaa in ay jiraan dhibaatooyin shakhsiyadeed oo haysta iyaga.
1.Waxaad u noqonotaa waalid .
Taageer ilmahaaga, weydii wixii isaga ku dhacay, idiga oo ku riixaya in uu sii wanaajiyo. Haddii aad aragto in ardaygaagu uu niyad-jabsan yahay, niyada u dhis oo isku day inaad dawayso dhibkiisa.
2. Saaxiibkood noqo, laakiin ha fogeyn
Ardayda ma jecla marka ay macallimiintu bilaabaan inay dhaqmaan sida ardayga. Shaqada sii wad, ka caawi ardayda leh shaqada dugsiga, dhagayso, ka hadal noloshooda, laakiin xusuusnow cidda aad tahay. Xitaa haddii aad tahay takhasus yare, oo aad ku dhowdahay da'da iskuulkooda ama da' ahaanba aad yartahay,(ha isticmaalin ereyada suuqiga ah ee iyagu ku kaftamaan).
Ha noqon qallafsane xirfadle ah. Ilaa haddaad fahamto, tani ma aha habka ugu wanaagsan ee lagu helo sumcad wanaagsan. Waxaad Novotna mid dabacsan oo ay kusoo hirtaan.
3. Calaamaddaada ku habboon noloshooda
Haddii aad rabto in ardaygaaguxusuusto casharradaada, iskuday inaad isku xirto macluumaadka aad siiso iyo nolosha ardayga la xidhiidha. Waxaad isticmaali kartaa qaar ka mid ah iyaga tusaale ahaan, sharaxaadda arrintan ama xaaladdan: waxay noqon doontaa mid aad u xiiso leh oo ay xasuustaan casharadaas, laakiin maahan kuwa caajis ku leh, isku day inaad u sharaxdo muhiimadda isbeddelada kala duwan ee sayniska.
Kaliya isku day inaad sameyso tusaalayaal, sida isle'egyadan kala duwan ayaa ka caawin kara mustaqbalka.
4 Wakhtigaaga u isticmaal si caqligal ah
Xusuusnow cidda aad tahay iyo meesha aad joogtid.
Xasuusnow, wakhtigaas ayaa muhiim u ah ardaydaada, sidaa daraadeed, waa inaad waqtigooda ilaalisaa oo aad bartaa ardeygana inay tahay waqti qaliya oo uu isagu leeyahay dibna aan u soo noqonayn.
5. Qoondee waqtigaaga oo ku dhaqan habka cashardiyaarintaada.
Sharaxaad dheeri ah samee, Samir samee, una sharax casharka mar iyo marba, hubi in dhammaan fahamkooda iyo qalbigooduba kula socdo adiga.
6 Baro siyaabo kala duwan
La soco qaybaha danbe...............